Douglas Karr | को संस्थापक Martech Zone
द्वारा लेखहरू Douglas Karr
बुधबार, अप्रिल 7, 2021 बुधबार, अप्रिल 7, 2021 Douglas Karr
जgle्गगलन, जंगल स्काउटको पहिलो-पहिले विक्रेता सम्मेलनको साथ अमेजन सफलताको यात्रा शुरू गर्नुहोस्। जgle्गलकनले विशेष प्रस्तुतिकरण, ट्यूटोरियलहरू, र अमेजन विक्रेता विशेषज्ञहरूको अन्तरदृष्टि प्रस्तुत गर्दछ। तपाईंको बिक्री रणनीति अपग्रेड गर्नुहोस् र तपाईंको व्यवसायलाई नयाँ उचाइहरूमा लैजानुहोस्। के जंगलकोन नि: शुल्क छ? JungleCon एक नि: शुल्क दुई-दिन भर्चुअल सम्मेलन हो, तर तपाइँले भाग लिनको लागि दर्ता गर्नुपर्दछ। के तपाईंलाई जंगलकोनमा भाग लिन जंगल स्काउट सदस्यता चाहिन्छ? तपाईंलाई जंगलकोनमा भाग लिन जंगल स्काउट योजना आवश्यक छैन। सत्रहरू चयन गर्नुहोस्
एन्ड्रोइड प्ले स्टोरमा २.2.87 मिलियन भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू र आईओएस अनुप्रयोग स्टोरमा १.1.96 million मिलियन भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू उपलब्ध छन्, हामी यो बढाइबढाइ हुने छैनौं यदि हामीले भन्यौं कि एप मार्केट बिग्रँदै गइरहेको छ। तार्किक रूपमा, तपाइँको अनुप्रयोग तपाइँको प्रतिद्वन्द्धिबाट उही कोनिको अर्को अनुप्रयोगसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन तर बजार क्षेत्रहरू र कोठाका अनुप्रयोगहरूबाट। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई तपाइँको अनुप्रयोगहरू कायम राख्नका लागि दुई तत्वहरू चाहिन्छ
बिहीबार, अप्रिल 1, 2021 शुक्रबार, अप्रिल 2, 2021 Douglas Karr
प्रत्येक दिन मेरो इनबक्स स्प्यामिंग एसईओ कम्पनीहरूसँग आक्रोशित छ जो मेरो सामग्रीमा लिंकहरू राख्न भिक्षा गर्दै छन्। यो अनुरोधहरूको अन्तहीन प्रवाह हो र यसले मलाई चिढचिढ्याउँछ। यहाँ छ कसरी ईमेल सामान्यतया जान्छ ... प्रिय Martech Zone, मैले याद गरे कि तपाईले यो कीवर्ड लेख गर्नुभयो। हामीले यसमा विस्तृत लेख पनि लेख्यौं। मलाई लाग्छ कि यसले तपाईंको लेखमा ठूलो थप बनाउनेछ। कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने